Ukusakazeka kwe-Ultrasonic of Polishing Agents (CMP) - Hielscher Ultrasound Technology
Usayizi wezinhlayiyana ongafani nobuningi bokusabalalisa usayizi wezinhlayiyana kubangela ukulimala okukhulu endaweni epholile ngesikhathi senqubo ye-CMP.
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic kuyindlela ephakeme yokusabalalisa nokuhlukanisa izinhlayiyana zokupunga ezincane.
Ukusabalalisa komfaniswano okwenziwe yi-sonication kubangelwa ukucubungula okuphezulu kwe-CMP ukugwema ukukhwabanisa neziphambeko ngenxa yamabele okusanhlamvu.
Ukusabalalisa kwe-Ultrasonic yePolishing Particles
Ama-nano-particles asetshenziselwa ukuhlukumeza ahlanganisa i-silicum dioxide (i-silica, i-SiO2), cerium oxide (ceria, CeO2), aluminium oxide (alumina, Al2O3), α- no-y-Fe203, ama-nanodiamond phakathi kwabanye. Ukuze ugweme ukulimala endaweni ephosiwe, izinhlayiya ezilahlayo kufanele zibe nomumo ofanayo kanye nokusabalalisa okusayizi okusanhlamvu okusanhlamvu. Ubukhulu bezinhlayiyana eziphakathi kwezinhlayiyana eziphakathi kuka-10 no-100 nanometers, kuye ngokuthi ukwakheka kwe-CMP nokusetshenziswa kwayo.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic kwaziwa kakhulu ukukhiqiza umfaniswano, ukusabalalisa isikhathi eside isikhathi eside. I-Ultrasonic cavitation futhi ubophe amabutho umbhangqwana amandla adingekayo ekumiswe ukuze ama-agglomerate aphulwe, vimba ama-Waals amabutho anqobe futhi ama-nanoparticles abrasive asakazwa ngokufanayo. Nge sonication kungenzeka ukunciphisa usayizi wezinhlayiyana ngokuqondile usayizi okusanhlamvu okusanhlamvu. Ngokusetshenziselwa ukufana kwe-ultrasonic ye-slurry, okusanhlamvu okungaphezu kwamandla nokusabalalisa usayizi ongalingani kungaqedwa – ukuqinisekisa izinga lokususwa kwe-CMP ngenkathi kunciphisa okwenzeka emanxebeni.
I-sonication yangaphambi nangemva: I-curve eluhlaza ibonisa ubukhulu bezinhlayiyana ngaphambi kwe-sonication, i-curve ebomvu ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ze-silika e-ultrasonically ehlakazekile.
usayizi wezinhlayiyana ezihlosiwe
ukuhlushwa okuphansi kuya phezulu
ukukhiqiza kabusha okuqondile
i-linear, i-seamless scale-up
I-ultrasonic yokwenza i-CMP
Ukuhlanganiswa kwe-ultrasonic nokuxuba kusetshenziselwa izimboni eziningi ukukhiqiza ukumiswa okwakhayo nge-viscosities ephansi kakhulu. Ukuze ukhiqize ama-slurries e-uniform futhi azinzile, izinto zokwehla (isib. Silika, ceria nanoparticles, α- and y-Fe203 njll), izithasiselo namakhemikhali (isib. izinto zokwakheka kwe-alkaline, i-rust inhibitors, i-stabilizers) zihlakazeka emzimbeni wamanzi (isib. amanzi ahlanzekile).
Ngokuphathelene nekhwalithi, ukukhwabanisa okuphezulu kokusebenza kwe-slurries kuqakathekile ukuthi ukumiswa kubonisa ukuzinza kwesikhathi eside kanye nokusabalalisa okulinganayo kwezinhlayiyana.
Ukuhlakazeka kwe-Ultrasonic nokuklama kuhambisa amandla adingekayo ukuze agcwalise futhi asakaze ama-agent abamba ukupholisa. Ukulawulwa okucacile kwemingcele yokucubungula i-ultrasonic kunikeza imiphumela emihle ekusebenzeni okuphezulu nokuthembeka.
I-industrial ultrasonic disperser UIP1500hdT
Izinhlelo ze-Ultrasonic Dispersing
I-Hielscher Ultrasonics inikela ngezinhlelo eziphezulu zamandla e-Ultrason zokuhlakazeka kwezinto ezisetshenziswa ngosayizi we-nano ezifana ne-silica, ceria, alumina ne-nanodiamonds. Amaprosesa athembekile we-ultrasonic aletha amandla adingekayo, ama-metabolic ahambisanayo e-ultrasonic enza izimo ezinhle zenqubo futhi opharetha banokulawula okuqondile kuwo wonke amapharamitha, ukuze imiphumela yenqubo ye-ultrasonic ingafakwa ngqo kumigomo yenqubo oyifunayo (njengosayizi wokusanhlamvu, ukusatshalaliswa kwezinhlayiyana njll. ).
Enye yezinqubo ezibaluleke kunazo zonke yi-amplitude ye-ultrasonic. Hielscher's izinhlelo ze-industrial ultrasonic kungaba ngokukhululeka ukuletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Ikhono lokusebenzisa ama-amplitudes anjalo aqinisekisayo ukuthi imigomo yenqubo efuna kakhulu ingafinyelelwa. Zonke izinqubo ze-ultrasonic zethu zingahle zilungiswe kahle ezimweni ezidingekayo zenqubo futhi zihlolwe kalula nge-software eyakhelwe ngaphakathi. Lokhu kuqinisekisa ukuthembeka okuphakeme kakhulu, ikhwalithi ehambisanayo kanye nemiphumela ephindaphindiwe. Ukuqina kwemishini ye-ultrasonic ye-Hielscher kuvumela ukusebenza komsebenzi we-24/7 emsebenzini obuthakathaka nasezindaweni ezinzima.
I-Mondragón Cazorla R., uJuliá Bolívar JE, uBarba Juan A., uJarque Fonfría JC (2012): Ukufaniswa kwe-nanofluids yama-silika-amanzi ehlakazwa nge-probe ye-ultrasound: Ukuhlolwa kwezakhiwo zabo zomzimba nokuzinza. Ubuchwepheshe bePowder Vol. 224, 2012.
I-Pohl M., u-Schubert H. (2004): Ukusabalalisa nokusabalalisa ama-nanoparticles ngezixazululo ezinamandla. Partec, 2004.
I-Platinum Mechanical Planarization (CMP)
Ama-slurries asetshenziswe ngamakhemikhali / ama-planarization (CMP) asetshenziselwa ukushisa. I-CMP slurry iqukethe izingxenye zamakhemikhali nezinsimbi ezithintekayo. Ngaleyo ndlela, i-CMP ingachazwa njengendlela ehlanganisiwe yokumakhemikhali yamakhemikhali kanye nokupholisa okumnyama.
Ukumiswa kwe-CMP kusetshenziselwa ukupholisa nokushisa i-silicon oxide, i-poly silicon nezinsimbi zensimbi. Ngenkathi yenqubo ye-CMP, indawo yesimo sendawo isuswe endaweni yokugcina (isb. Semiconductors, i-wafers solar, izingxenye zamadivayisi kagesi).
Ukuze uthole ukubunjwa kwe-CMP esesigxile isikhathi eside, ama-surfactants ayengeziwe ukugcina ama-nanoparticles ekumiswe okwesikhashana. Amakhemikhali asetshenziselwa ukuhlakazeka ngokuvamile angaba cationic, anionic, noma nonionic futhi afaka i-sodium dodecyl sulfate (SDS), i-cetyl pyridinium chloride (CPC), usawoti we-sodium we-capric acid, usawoti we-sodium we-lauric acid, i-sodium sulfate encane, i-hexadecyl sodium sulfate, i-hexadecyltrimethylammonium bromide (C16TAB), i-dodecyltrimethylammonium bromide (C12TAB), Triton X-100, Tween 20, Tween 40, Tween 60, Tween 80, Symperonic A4, A7, A11 no-A20.